ဝါးခယ်မ : ၀ါးခယ်မ အထက ၁ မြတ်ဆရာပူဇော်ပွဲ အခြေခံ မူများ
၀ါးခယ်မမြို.နယ် အထက ( ၁ ) မြတ်ဆရာ ပူဇော်ပွဲ ဖြစ်မြောက်ရေးအတွက် ပထမ ဆုံးအကြိမ် အကြို ညှို နှိုင်း မှုကို ၂၀၁၇ ဒီဇင်ဘာ ၂၄ ရက်နေ. က ဧရာဝတီတိုင်း ဓမ္မာရုံတွင် ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည် ။ ထို.နောက် ပထမ အကြိမ် အစည်းအဝေးကို ၂၀၁၈ ဇန်န၀ါရီ လ ၇ရက်နေ. နေ.လည်က ၀ါးခယ်မအသင်းတိုက် တွင် ကျင်းပခဲ့ပါသည် ။ ထိုအစည်းအဝေးသို.စာသင်နှစ် ၇ ခု မှ ကျောင်းသား/သူ ဟောင်းများ တက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည် ။ ဆက်လက်၍ ဒုတိယ အကြိမ် မြောက် အစည်းအဝေးကို ၂၀၁၈ ဇန်န၀ါရီ လ ၁၄ ရက်နေ. နေ.လည်က ၀ါးခယ်မအသင်းတိုက် တွင် ကျင်းပခဲ့ပါသည် ။ ထိုအစည်းအဝေးသို. ၁၉၆၈ မှ ၂၀၀၇ အတွင်း ကျောင်းသား/သူဟောင်း ၁၈ ဦးတက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည် ။
၂၀၁၈ ဇန်န၀ါရီ လ ၂၈ ရက်နေ.တွင်မူ ရန်ကုန်မြို. စိမ်းလန်းစိုပြေ ပန်းခြံတွင် ၀ါးခယ်မ အထက ၁ မြတ်ဆရာ ပူဇော်ပွဲကျင်းပနိုင်ရေး တတိယအကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးတွင် ၀ါးခယ်မ အထက ၁ မြတ်ဆရာ ပူဇော်ပွဲ ဖြစ်မြောက်ရေး ပင်မကော်မတီ ( ယာယီ ) ကို ဖွဲ.စည်းနိုင်ခဲ့ပြီး ဆရာကန်တော.ပွဲအတွက် အခြေခံ မူ ၆ရပ် ကြိုတင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည် ။ ထိုအစည်းအဝေးသို.ကျောင်းသား/သူဟောင်း ၃၅ ဦးခန်.တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည် ။
၂၀၁၈ ဖေဖေါ်ဝါရီ ၂၅ ရက် မနက်တွင်မူ ၀ါးခယ်မမြို.နယ် ၀ါးခယ်မအသင်းရုံးတွင် စတုတ္ထအကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ၀ါးခယ်မ အထက ၁ မြတ်ဆရာ ပူဇော်ပွဲ ဖြစ်မြောက်ရေး ပင်မကော်မတီ ကို တရားဝင် ဖွဲ.တည်ခဲ့သလို အခြေခံမူ ၆ရပ် ကိုလည်း အတည်ပြု သတ်မှတ်နိုင်ခဲ့ပါသည် ။ ထိုအစည်းအဝေးသို. ၁၉၆၈ မှ ၂၀၀၈ အထိ အထက ၁ တွင် ပညာသင်ကြားခဲ့ကြသော ၀ါးခယ်မ နှင့် ရန်ကုန်ရောက် ကျောင်းသား/သူပေါင်း ၅၀ ခန်.တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည် ။
၀ါးခယ်မ အထက ( ၁ ) မြတ်ဆရာ ပူဇော်ပွဲ အတွက် ဆုံးဖြတ်ထားသော အခြေခံမူ ၆ ရပ်မှာ
( ၁ ) ၂၀၁၈ ခုနှစ်မှစ၍ ၀ါးခယ်မမြို. အထက ၁ မြတ်ဆရာ ပူဇော်ပွဲအား နှစ်စဉ် ကျင်းပသွားရန်
( ၂ ) အထက ၁ မြတ်ဆရာ ပူဇော် ပွဲအား နှစ်စဉ် ဒီဇင်ဘာလ၏ ပထမဆုံး တနင်္ဂနွေ တွင် ကျင်းပသွားရန်
( ၃ ) အထက ၁တွင် တစ်နှစ် သင်ကြားပေးခဲ့ပြီး ကန်တော.ပွဲကျင်းပမည့်နေ.တွင် အသက် ၆၀ ပြည့်ပြီးသော ဆရာ/ဆရာမအားလုံးအားကန်တော့ရန်
( ၄ ) အာစရိယ ပူဇော်ပွဲ အတွက် ကောက်ခံရရှိသော ၊ အလှုခံရရှိသော ငွေကြေးအားလုံးအား ဆရာကန်တော.ပွဲ အတွက် မှလွဲ၍ အခြားမည်သည့် ကိစ္စရပ်အတွက် မှ သုံးစွဲခြင်းမပြုရန်
( ၅ ) ကန်တော.့ပွဲအပြီးတွင် ပိုလျှံငွေအား အကုန်သုံးပစ်ခြင်းမျိုး မပြုပဲ နောက်နောင် ရန်ပုံငွေ အားနည်းသော နှစ်များ ရှိလာပါက အထောက်အပံ့ ဖြစ်စေရန်အတွက် အဖွဲ.၏ အမည်ဖြင့် ဘဏ်တွင်သာ အပ်နှံပြီး အခြားမည်သူ.ထံ ၊ မည်သည့်နေရာတွင်မှ မထားရှိရန်
( ၆ ) နှစ်စဉ် ကျင်းပရန် ရည်သန်ထားသဖြင့် ဆရာကန်တော.ပွဲမှ လွဲ၍ ဖျော်ဖြေမှု ၊ ညစာစားပွဲ အပါအ၀င် အခြားသော ထပ်တိုးအစီအစဉ်များကို ကော်မတီ မှ တာဝန်ခံကျင်းပခြင်း မပြုရန်
တို. ဖြစ်ပါသည် ။